परीक्षाको मुखमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित
रिपोर्ट सोमबार, माघ २८, २०७५
सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुलेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेज, पाेखराका विद्यार्थीले २७ माघदेखि रिले अनशन शुरु गरेका छन् । आफूहरुको विरोध र हड्तालका बाबजुत नियमनकारी निकायले समेत छानविन नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले कलेज प्राङगणमा अनशन थालेका हुन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेज, पाेखरा । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ
१८ माघमा विद्यार्थीहरुले कलेज प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उनीहरुको माग थियो, ‘विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल प्राप्त होस् र अतिरिक्त शुल्क तुरुन्त बन्द होस् ।’ १७ माघदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन शुरु गरेका विद्यार्थीहरुले त्यसको भोलिपल्ट कलेज प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
समयमा शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यार्थी उमेश श्रेष्ठलाई कलेजले तेस्रो बर्षको पूरक परीक्षा दिन रोक लगायो । काठमाडौंबाट उनका अभिभावक कलेजमा आए र २६ लाख रुपैयाँ तिर्ने कबुल गरेपछि मात्रै उमेश चौथो वर्षमा भर्ना हुन पाए ।
वार्षिक शुल्क शीर्षकमा कलेजले लिने २२ लाख रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा कलेजले ब्याज र जरिवानाबापत् रु. ४ लाख थपेर उमेशका अभिभावकसँग रु. २६ लाख माग्यो । यसरी विद्यार्थीसँग बढी रकम अशुल्ने र शुल्क भुक्तानी गर्न नसके परीक्षामा सहभागी हुन नदिने गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विना भर्पाइ लाखौं अशुल्दै
विद्यार्थीसँग कलेज प्रशासनले स्वास्थ्य परीक्षण भनेर वार्षिक ५ हजार लिन्छ । तर अहिलेसम्म कसैको पनि स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फारम शुल्कवापत् २ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनेपनि कलेजले परीक्षा फारम भर्न रु. ६ हजार ५०० लिने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
रिले अनसनमा बसेका विद्यार्थी ।
कलेजले विद्यार्थीसँग रु. १ लाख ८० हजार रुपैयाँ ‘इन्टर्नशीप शुल्क’ को नाममा लिने गरेको छ । ‘इण्टर्न’ परीक्षार्थीहरुलाई भने मासिक भत्ताबापत् रु. १० हजारमात्रै दिएर प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ नाफा गर्ने गरेको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् ।
सरकारले मेडिकल कलेजमा सीट संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्ता विद्यार्थीसँग समेत १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क असुलेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
जुन रकम फिर्ता गर्न विद्यार्थीहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत् माग गरेका छन् । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
भर्ना शुल्कदेखि परीक्षा फारमलगायत सम्पूर्ण खर्च सहित शुल्क निर्धारण गरिएको भए पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी रु. ५५ लाख ७५ हजार लिँदै आएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
विद्यार्थीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग वार्षिक १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ । गण्डकी मेडिकल कलेजमा विभिन्न व्याचमा अहिले ४ सय भन्दा बढी विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनरत छन् । "प्रतिविद्यार्थी रु. १३ लाख २५ हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाउँदा रु. ५३ करोड रकम अतिरिक्त शुल्कका नाममा मात्र असुलिँदैछ", एक विद्यार्थीले भने ।
आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी ।
कलेजले हरेक वर्ष शुल्क दर बढाउँदै गएको पनि विद्यार्थीको गुनासो छ । शैक्षिक वर्ष २०१५ का प्रति विद्यार्थी रु. १ लाख ५० हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क लिएको कलेजले २०१६ मा रु. २ लाख, २०१७ र २०१८ का विद्यार्थीसँग रु. ३ लाखका दरले अतिरिक्त शुल्क लिएको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
विद्यार्थीले कलेजमा भर्ना भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्षकमा तिरेको रकमको आधिकारीक बील वा भर्पाइ आफूहरुले पाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क भनेर लिने रकमको भर्पाइ माग्दा ‘सादा कागज’को टुक्रामा लेखेर दिने गरेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । "एमबीबीएस मात्र होइन, नर्सिङ, बीडीएसलगायत सबै विभागमा यसरी नै असुली गरिँदै आएको छ," एक विद्यार्थीले भने ।
माथि मिलेमतो, तल त्रास
गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दा देखिएका विकृति विसंगतिका विषयमा बोल्ने विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले धम्की दिने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । प्रशासनले प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिदिने, भर्ना रद्द गरिदिने, परीक्षा फर्म भर्न नदिन जस्ता धम्की दिने गरेको विद्यार्थी रविना मिश्रले बताइन् ।
सन् २०१० मा पहिलो व्याचमा अध्ययन गरेका एक विद्यार्थी भन्छन्, “त्यतिबेला पनि यस्तै धम्की दिने र अवैध रुपमा धेरै पैसा लिने गरिएको थियो ।” हाल इन्टर्न गरिरहेका ती विद्यार्थी थप्छन्, “हामीले आन्दोलन गर्दा पनि धम्की दिने, परीक्षामा मानसिक तनाव दिने, पैसा नदिएसम्म परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज गर्ने गर्थे, अहिले पनि हालत उस्तै छ ।”
विद्यार्थीले कलेज प्रशासनलाई बुझाएको मागपत्र ।
अनुगमन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मिलेमतोमा लागेको विद्यार्थीको आरोप छ । “त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका मान्छेहरु खबर गरेर अनुगमनमा आउँछन्,” एक विद्यार्थी भन्छन्, “कलेज हेरेजस्तो गरेर फर्कन्छन् ।”
कसैले पनि आफुहरुको मागबारे सुनुवाई नगरेको विद्यार्थी प्रविन गौतमले बताए । दुई सातापछि परीक्षा शुरु हुने तालिका रहेपनि माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
यही समय कलेजले अतिरिक्त शुल्क तत्काल बुझाउन र नबुझाए फारम भर्न नपाइने भनेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । परीक्षाको मुखमा कलेजले यसरी धम्की दिँदा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव भइरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।
कलेज प्रशासनलाई सरकारले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क नलिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र संकाय, डिनको कार्यालयले पत्राचार गरेको छ । पत्रमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन र पठन पाठन पुनःसञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । कलेज प्रशासनले भने विद्यार्थीसँग बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएको छ ।